'IT: Toko faharoa' dia misy ny sary an-tsary Adrian Mellon, manamafy ny mpanoratra
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly 'IT: Toko faharoa' dia misy ny sary an-tsary Adrian Mellon, manamafy ny mpanoratra
by Michael Carpenter Enga anie 13, 2019
by Michael Carpenter Enga anie 13, 2019 1,270 hevitra
Amin'ny maha-mpankafy ny tantaran'i Stephen King azy IT, lasa mazava be fa tsy hahazo fampifanarahana mahatoky mihitsy isika. Samy niala tamin'ny boky tamin'ny lafiny maro ny sarin'asan'ny miniseries sy ny talen'ny Andy Muschietti tamin'ny taona 1990, ary IT: Toko faharoa toa vonona hanao toy izany koa.
Nesoriko ny zava-misy fa misy zavatra vitsivitsy tsy aleoko mifangaro, noho ny antony mazava, tonga saina aho fa tsy misy fampifanarahana haka tanteraka ny bokin'i King. Raha ny marina, angamba ho an'ny tsara indrindra izany, satria efa namaky an'io tantara io isika.
Misaotra vaovao THR tafatafa tamin'ny IT: Toko faharoa Mpanoratra horonantsary Gary Dauberman na izany aza, afaka miala sasatra mora isika amin'ny fahafantarana fa farafaharatsiny filaharana malaza iray hafa farafaharatsiny no hahatonga ilay sarimihetsika ho avy. Nanamafy i Dauberman fa hamboarina ny famonoana an'i Adrian Mellon.
“Sehatra malaza io ao amin'ny boky ary tianay hampidirina ao amin'ilay sarimihetsika. Ity no fanafihana voalohany an'i Derry ankehitriny ary mametraka ny dingana ho lasa Derry. Izany dia ny fitaoman'i Pennywise na dia eo am-pandriana hibernal aza izy, ary tena faharatsiana ny mahazo an'i Adrian. Ireto mpampijaly miasa amin'ny Pennywise ireto dia zava-dehibe ho anay aseho.
Ho an'ireo vitsy mbola tsy namaky IT, Adrian Mellon dia lehilahy niaraka tamin'ny sakaizany Don rehefa notafihin'ny andian-jiolahimboto homophobic izy. Natsipy ambony tetezana i Mellon ary nandondona azy tsy nahatsiaro tena, avy eo nahatanteraka nampihoron-koditra tamin'ny Pennywise niandry.
Ity sehatra ity dia tsy noraharahaina tanteraka tamin'ny miniseries 1990, na dia rariny aza, ireo horonantsary roa natambatra ireo dia maharitra telo ora mahery ny fotoana fiarahana miasa. Manantena aho fa i Dauberman, Muschietti, ary ny ekipany hanao izany fitsarana tsy mitongilana izany.